FAQ - ZHONGHUI ANOGADZIRA ANOGADZIRA (JINAN) GROUP CO., LTD
Zvigadzirwa & Mhinduro
Ultra Precision Kugadzira Mhinduro
Nemazvo Granite Solutions
Nemazvo Granite Imwe-mira Solutions
Granite Mechacnical Zvikamu
Granite Mhepo Kutakura
Granite Yakatwasuka Edge
Granite Tri Square Mutongi
Granite Square Mutongi
Granite V Bvisa
Nemazvo Ceramic Solutions
Precision Ceramic Imwe-mira Mhinduro
Ceramic Square Mutongi
Ceramic Yakarurama Edge
Ceramic Mhepo Inoyerera Mutongi
Ceramic Mhepo Kubereka
Ceramic Mechanical Zvikamu
Nemazvo Metal Solutions
Precision Metal Imwe-mira Mhinduro
Kanda Iron Surface Plate
Nemazvo Metal machine
Nemazvo Metal Kukanda
Yakagadziriswa Kudzingwa Maitiro
Nemazvo machine Maitiro
Precision Girazi Mhinduro
Precision Girazi Imwe-mira Mhinduro
Girazi Machining Maitiro
Mineral Kukanda Imwe-mira Mhinduro
Mineral Kukanda Zvikamu
Ultra Yakakwira Performance Concrete - UHPC
UHPC Imwe-mira Mhinduro
Industrial Anti Vibration Mudziyo
Yakajairwa Thread Inoisa
Assembly & Calibration & Kuongorora
Kugadzirisa Broken Granite
Dhizaini & Kutarisa Mifananidzo
Metrology & Yekuongorora Midziyo
Vertical Kuenzanisa Machine
Single Side Vertical Kuenzanisa Machine
-Kaviri-mativi Vertical Kuenzanisa Machine
Horizontal Kuenzanisa Machine
Hard Kubereka Kuenzanisa Machine
Soft Kupa Kuenzanisa Machine
Gungano & Chengetedza
Yakagadzirwa- Yakagadzirwa Kuenzanisa Machine
Kugadzira & Technologies
Kuve Mumiriri Wedu
1. Sei Uchisarudza Granite yeMuchina Bases uye Metrology Zvikamu?
Granite rudzi rwegneous dombo rakacherwa nekuda kwesimba rayo rakanyanya, kuwanda, kugadzikana, uye kuramba kurora. Asi girenayiti zvakare inoita zvakasiyana-siyana - haisi yezvikwere nemakona chete! Muchokwadi, Isu tinoshanda nechivimbo nezvinhu zvegranite zvakagadzirwa mumhando, maakona, uye makakombama emisiyano yese nguva dzose - zvine mhedzisiro yakanaka.
Kubudikidza neyedu mamiriro ekugadzirwa kwehunyanzvi, akachekwa maficha anogona kunge akasarudzika. Unhu uhwu hunoita kuti girenayiti ive yakanaka yekugadzira tsika-saizi uye tsika-dhizaini muchina mabhesheni uye metrology zvikamu. Granite ndeye:
■ kunyatsoti sandara kana wacheka nekupedzwa
■ ngura inodzivirira
■ inogara kwenguva refu
Granite zvinoriumba zvakare zvakareruka kuchenesa. Paunenge uchigadzira tsika dhizaini, ive shuwa kusarudza granite kune ayo epamusoro mabhenefiti.
MAZANO / KUSVIRA KWEMAWANDA KUDZIDZA
Iyo girenayiti inoshandiswa neZHHIMG kune edu akajairwa ekumusoro eplate zvigadzirwa ine yakakwira quartz zvemukati, izvo zvinopa kukurira kukuru kupfeka uye kukuvara. Yedu Yakakwirira Nhema mavara ane yakaderera mvura yekumwa mwero, zvichideredza mukana weako chaiwo magirazi gauing ngura uchigara pamahwendefa. Iwo mavara egranite anopiwa neZHHIMG anokonzeresa kudzvokora kushoma, zvinoreva kuti maziso eziso mashoma kune vanhu vanoshandisa mahwendefa. Isu takasarudza edu granite mhando tichifunga nezvekuwedzera kwekushisa mukuyedza kuchengetedza chinhu ichi kushoma.
Kana yako application ikadaira ndiro ine maumbirwo echinyakare, akaiswa shinda, slots kana imwe machining, iwe uchazoda kusarudza zvinhu senge Black Jinan Nhema. Izvi zvakasikwa zvinhu zvinopa kuomarara kwakanyanya, kwakanyanya vibration kudzikisira, uye nekuvandudza machinability.
2. Ndeupi ruvara rwegranite rwakanyanya?
Izvo zvakakosha kuti uzive kuti ruvara rwoga harusi chiratidzo chehunhu hwenyama hweibwe. Kazhinji, ruvara rwegranite rwakanangana zvakananga nekuvapo kana kusavapo kwemaminerari, ayo anogona kunge asina chekuita nehunhu hunoita yakanaka pamusoro peplate zvinhu. Iko kune epingi, grey, uye nhema matema ayo akakodzera kune ekumusoro mahwendefa, pamwe neakasviba, grey, uye epinki magranite ayo asingatombokodzeri kunyatsoita mashandisirwo. Hunhu hwakakomba hwegranite, sezvo iine chekuita nekushandisa kwayo seplate yepadenga zvinhu, haina chekuita neruvara, uye ndeinotevera:
Kuomarara (kutsauka pasi pemutoro - kunoratidzwa neModulus yeElasticity)
■ Pfeka kuramba
Isu takaedza zvinhu zvakawanda zvegranite uye tikaenzanisa izvi zvinhu. Pakupedzisira tinowana mhedzisiro, Jinan nhema girenayiti ndiyo yakanakisa zvinhu isu tati tamboziva. Indian Nhema girenayiti uye South Africa girenayiti zvakafanana Jinan Black Granite, asi yavo panyama zvimiro zviri zvishoma pane Jinan Black Granite. ZHHIMG inoramba ichitsvaga zvimwe zvigadzirwa zvegranite mupasi uye nekuenzanisa zvimiro zvavo zvemuviri.
Kuti utaure zvakawanda nezve iyo granite iyo yakakodzera kune yako projekiti, ndapota taura nesu info@zhhimg.com.
3. Iko kune indasitiri chiyero chepamusoro peplate kunyatso?
Vagadziri vakasiyana vanoshandisa zviyero zvakasiyana. Kune akawanda matanho munyika.
DIN Yakajairwa, ASME B89.3.7-2013 kana Federal Tsananguro GGG-P-463c (Granite Surface Plates) uye zvichingodaro sehwaro hwesarudzo yavo.
Uye isu tinogona kugadzira granite chaiyo yekuongorora ndiro maererano nezvaunoda. Kugamuchirwa kuti utaure nesu kana iwe uchida kuziva rumwe ruzivo nezve mamwe matanho.
4. Ko flatplate flatness inotsanangurwa uye kududzirwa sei?
Flatness inogona kutariswa semapoinzi ese ari pamusoro ari mukati memapuraneti maviri akafanana, ndege yepasi uye ndege yedenga. Kuyerwa kwedaro pakati pendege ndiko kugadzikana kwepasi. Kuyera kwakadzikama uku kunowanzo kutakura kushivirira uye kunogona kusanganisira kudanidzirwa kwegiredhi.
Semuenzaniso, iko kutsiga kushivirira kwematanho akaenzana mamakisi kunotsanangurwa mune yemubatanidzwa tsananguro sekusarudzwa neinotevera fomula:
■ Rabhoritari Giredhi AA = (40 + diagonal squared / 25) x .000001 "(unilateral)
■ Kuongorora Giredhi A = Rabhoritari Giredhi AA x 2
Room Kamuri Yezvishandiso Giredhi B = Rabhoritari Giredhi AA x 4.
Kune akaenzana saizi yepamusoro mahwendefa, isu tinovimbisa flatness kushivirira iyo inodarika izvo zvinodiwa zveichi chirevo. Pamusoro pekupfava, ASME B89.3.7-2013 & Federal Tsananguro GGG-P-463c kero misoro inosanganisira: dzokorora kuyerwa kunyatso, zvinhu zveplate ndiro granite, pamusoro pekupedzisa, nzvimbo yekutsigira nzvimbo, kuomarara, nzira dzinogamuchirwa dzekuongorora, kumisikidza kuiswa threaded, nezvimwe.
ZHHIMG granite pamusoro pemahwendefa uye mahwendefa ekuongorora mahwendefa anosangana kana kudarika zvese zvinodikanwa zvakatarwa mune iyi tsananguro. Parizvino, hapana chirevo chinotsanangurwa chema granite angle mahwendefa, akafanana, kana master squares.
Uye iwe unogona kuwana mafomula emamwe maitiro mu TORA.
5. Ndingaite sei kuti ndidzikise kupfeka uye nekuwedzera hupenyu hweplate yangu yepamusoro?
Kutanga, zvakakosha kuti ndiro igare yakachena. Guruva rine hasha remumhepo rinowanzo kuve sosi huru kwazvo yekupfeka uye kubvarura mundiro, sezvo ichiita seyakaiswa muzvidimbu zvebasa nenzvimbo dzekusangana dzegeji. Chechipiri, vhara ndiro yako kuti uichengetedze kubva kuguruva uye kukuvara. Hupenyu hwekupfeka hunogona kuwedzerwa nekuvhara ndiro kana isingashandiswe, nekutenderera ndiro nguva nenguva kuitira kuti nzvimbo imwechete isagashirwe zvakanyanya, uye nekutsiva mapedhi esimbi ekuyera ne carbide mapedhi. Uyezve, dzivisa kuisa chikafu kana zvinwiwa mundiro. Ziva kuti zvinwiwa zvakawanda zvine kabhoni kana phosphoric acid, iyo inogona kunyungudutsa zvicherwa zvakapfava zvosiya makomba madiki pamusoro.
6. Ndinofanira kuchenesa kakawanda sei ndiro yangu yepamusoro?
Izvi zvinoenderana nekuti ndiro iyi iri kushandiswa sei. Kana zvichibvira, tinokurudzira kuchenesa ndiro pakutanga kwezuva (kana kusuduruka kwebasa) uye zvakare kumagumo. Kana iyo ndiro ikave yakasviba, kunyanya ine oiri kana inonamira mvura, inofanira kunge ichicheneswa ipapo ipapo.
Chenesa ndiro nguva dzose nemvura kana ZHHIMG Isina mvura pamusoro peplaneti. Sarudzo yekuchenesa mhinduro yakakosha. Kana chinhu chisina kugadzikana chinoshandiswa (acetone, lacquer thinner, doro, nezvimwewo. Mune ino kesi, zvinodikanwa kubvumidza iyo ndiro kuti ive yakajairika usati waishandisa kana kuyerwa zvikanganiso zvichaitika.
Iyo nguva yenguva inodiwa kuti ndiro ive yakajairika inosiyana nehukuru hweplate, uye huwandu hwekutonhora. Hora rinofanirwa kukwana pamahwendefa madiki. Maawa maviri anogona kudiwa pamahwendefa mahombe. Kana pakashambidzwa nemvura-inoshandiswa, pachavewo nekumwe kubuda kwemhepo.
Iyo ndiro ichachengetedzawo mvura, uye izvi zvinogona kukonzera ngura dzesimbi zvikamu zvakabatana nepamusoro. Vamwe vanochenesa vanosiirawo masara anonamira mushure mekunge vaoma, izvo zvinokwezva guruva rinotakurwa nemhepo, uye zvobva zvawedzera kupfeka, pane kuzvidzikisira.
7. Ndiro yepamusoro inofanirwa kuyerwa kangani?
Izvi zvinoenderana nekushandiswa kweplate uye nharaunda. Tinokurudzira kuti ndiro nyowani kana chaiyo granite chishongedzo chigamuchire kuzere kugadzirisa mukati megore rimwe rekutenga. Kana iyo granite pamusoro peplate ikaona inorema kushandiswa, zvingave zvinokurudzirwa kupfupisa iyi nguva kusvika kumwedzi mitanhatu. Kuongorora kwemwedzi nemwedzi kwekudzokorora kuyerwa zvikanganiso uchishandisa Elektroniki chikamu, kana chakafanana chishandiso chinoratidza chero ari kusimukira ekupfeka mavara uye zvinongotora maminetsi mashoma kuita. Mushure mekuti mhedzisiro yekugadzirisa kwekutanga yagadziriswa, iyo nguva yekuyera inogona kuwedzerwa kana kupfupiswa sezvinobvumidzwa kana kudikanwa neako epamoyo mhando sisitimu.
Tinogona kupa sevhisi kuti ikubatsire kuongorora uye kuenzanisa yako granite pamusoro peplate.
8. Sei macalibrations akaitwa pandiro yangu yepasi achiratidzika kunge akasiyana?
Pane zvikonzero zvinoverengeka zvinogona kukonzera mutsauko pakati pekuyera:
Icho chese chakashambidzwa neyakaipisa kana inotonhora mhinduro isati yagadziriswa, uye yaisatenderwa nguva yakakwana yekumisikidza
Iyo ndiro yacho inotsigirwa zvisina kunaka
Kutungamira kwezuva kana kumwe kupisa kunopenya pamusoro peplate. Ive neshuwa kuti pamusoro pemwenje haisi kupisa pamusoro
Misiyano yetembiricha yekumira yakatwasuka pakati pechando uye zhizha (Kana zvichikwanisika, ziva iyo yekumusoro gradient tembiricha panguva iyo calibration inoitwa.)
Ndiro haina kubvumidzwa yakakwana nguva yekumisikidza mushure mekutumirwa
Kushandiswa zvisirizvo kwemidziyo yekuongorora kana kushandiswa kweasina-calibrated michina
Surface shanduko inokonzerwa nekupfeka
Iko stock yeJinan Nhema Granite iri Becom ...
Nei maGranites Aine Hunhu ...
Kuchenesa Mechanical Dhizaini Injiniya
Runhare: +86 199 6999 1659
Hofisi: Vaka 1, Jiazhouqicheng, Tianqiao Dunhu, Jinan, Shandong, CHN
Fekitori: Huanghe Maindasitiri Zone, HuaiyinDistrict, Jinan, Shandong, CHN
ZHHIMG - 2021. Hot Zvigadzirwa - Sitemap
Nemazvo Granite Cube, Nemazvo Granite Kufanana, Epoxy Concrete, Precision Granite Square Mutongi, Nemazvo Granite, Nemazvo Granite Surface Plate,